Maamulka Soomaalida Oo Shaaciyey Go'aan La Xiriira Ku Biirista Dagaalk...
Maamulka Soomaalida oo shaaciyey go’aan la xiriira ku biirista dagaalk…
Jigjiga (Wararka Maanta) – Maamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ku biiro dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF ee maamusha gooblka Tigray ee waqooyiga dalkaas.
Go’aankan ayaa yimid saacado kadib markii madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Mustafa Muxumed Cumar uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Faceebook ku sheegay in dagaalka ka socda Itoobiya uu u dhaxeeyo argagixisada TPLF iyo dawlada federalka Itoobiya.
“Dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya wuxuu u dhaxeeyaa argagixisada TPLF iyo dawlada federalka Itoobiya, ee uma dhaxeeyo laba deegaan oo dhul isku haysta. Waxaa argagixisada TPLF u qorshaysan inay dumiso nidaamka hadda jira dibna saameeyn ugu yeelato siyaasada dawlada dhexe si ay mar kale u guumaysato shucuubaha dalka ee Soomaalidu ka mid tahay,” ayuu Mustafa ku yiri qoraalka.
Saacado kadib qoraalkaas, ayaa Wasiirka Warfaafinta Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Cali Badal Muxumed oo waraysi BBC-da, waxa uu sheegay in ciidamada deegaanka ay xilli walba ay diyaar u yihiin inay difaacan wax kasta oo lid ku ah qaranimada Itoobiya.
Wararka Maanta : Puntland oo ka jawaabtay cabasho laga muujiyay dad lagu xukumay dil...
Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Dowlad Deegaanka Itoobiya uu mar walba diyaar u yahay la dagaalanka jabhadda TPLF ayna naf iyo maalba u hurayaan.
Wasiirka ayaa dhinaca kale beeniyey warar soo baxaya oo sheegaya in ciidamo Soomaali ah oo ka socda maamulka loo qaadayo furimaha hore ee dagaalka,
“Ciidamada la yiri waxaa la geynaya Woqooyiga Itoobiya anaga masuul ka ah oo go’aaminayno xilliga la qaadayo iyo haddii loo bahdaba in la qaado, balse ma jiraan wax ciidan ah oo hadda la qaaday oo si rasmi ah aan anaga u shaacinnay,” ayuu yiri.
Haddii ay maamulka Soomaalida uu ku biiro dagaalka, wuxuu noqonayaa maamulkii afaraad ee sidaas sameeya.
Saddex ka mid ah maamul goboleedyada kale ooEthiopia ayaa Khamiistii ku dhowaaqay inay ciidamo dirayaan si ay uga qeyb-galaan howlgalka gobolka Tigray, kuwaas oo kala ah; maamul goboleedyada Oromia, Sidama iyo SNNP.
“Ciidamada gaarka ah ee maamullada SNNP, Oromia iyo Sidama waxay u dhaqaaqeen jiidda hore ee dagaalka, si gaar ahna ciidamada Sidama waa ay gaareen furinta hore,” waxaa sidaas lagu yiri warbixin ay baahisay warbaahinta dowladda ee Fana.
Waxaa horey dagaalka qeyb uga ahaa maamulka Amxaarada, oo ay deris yihiin Tigrayga.
Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkan billaabay weerar cusub oo la doonayo in ciidamada qowmiyadda Amxaarada looga saaro dhul lagu muransan yahay oo ku yaalla galbeedka iyo koonfurta gobolka Tigray.
Ayaga oo ka jawaabaya, ayaa ciidamada iyo maleeshiyada Amxaarada waxay isu abaabuleen si xooggan, waxaana afhayeen u hadlay Gizachew Muluneh uu Arbacadii sheegay in ciidankooda ay difaaca ka baxeen oo ay weerar qaadayaan.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta MD Farmaajo oo Fashiliyey Qorshihii RW Rooble &...
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay iney ciidamo u dirayaan…
Daawo: Xildhibaan Jeesow oo shaaciyey inuu tegay xarunta NISA iyo wixi…
Wararka Maanta : Guddoomiye Sanyare" Ganacsatadii ka qeyb qaadan weyda taakulaynta dagaalka ...
Wararka Maanta : Deg Deg: Xiisad ka taagan Doorashadda, Rooble oo isbadalay & Qorshaha...
Wararka Maanta : Degmada Gabilay hal qof oo ku nafwaayay barkad biyood
Wararka Maanta : Qarax Weyn oo Gilgilay Dekedda Dubai
Wararka Maanta : Itoobiyaanka ku nool Hargeysa oo dibad-bax dhigay kadib markii lagu ee...
Wararka Maanta : Ogeysiis muhiim ah: Deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom
Wararka Somali25 mins ago
Wararka Videos22 hours ago